Duqa Cusub ee Magaalada Boosaaso oo Xilka la wareegay – Radio Muqdisho
Duqa Cusub ee Magaalada Boosaaso oo Xilka la wareegay
Munasabad uu xilka ku wareejinayay Duqii hore ee Magaalada Boosaaso isla Markaana uu kula wareegayay Duqa Cusub ayaa lagu qabtay Boosaaso.
Munaasabadda oo ka dhacday xarunta Magaalada Boosaaso ee Gobolka Bari ayaa waxaa ka soo qayb galay Mas’uuliyiin uu ka mid ahaa Wasiirka Arrimaha Gudaha Mamulka puntiland, qaar ka mid ah xildhibaannada Golaha Deegaanka dagmada Boosaas, Shaqaalaha Dowladda Hoose, guddiyada 16 Xaafadood ee Magaalada Boosaaso iy Guddoomiyaha Gobolka Bari.
Xoghayaha Dowladda Hoose ee Degmada Boosaaso Cabdirisaaq Axmed Galdoon ayaa xilka ku Wareejiyay Duqa Cusub ee dagmada Boosaaso Eng Yaasiin Mire.
Guddoomiyaha Gobolka Bari Yuusuf Maxamuud Wacays ayaa sheegay in Shaqaalaha Dowladda Hoose lagu kala saari doono Aqoontooda isla markana ay Dhici doonin in xilalka layska haysto Muddo dheer isagoo ugu baaqay Shaqalaha Dowladda Hoose ee Magaalada Boosaaso inay ka shaqeeyaan Horumarka dadkooda.
Wasiirka Arrimaha Gudaha iyo Dowladaha Hoose ee Mamulka Puntiland Axmed Cisman Karaash ayaa ugu baaqay Xafiiska hantidhowrka Qaranka maamulka Puntiland in ay dabagal ku sameeyaan hantida Dolwadda ka maqan.
Dadkii ka Barakacay Qansaxdheere oo dib u soo laabanaya
Wasiirka Caafimaadka oo shir uga qayb galaysa Kuwait “Sawirro”
Wasiirka Caafimaadka oo shir uga qayb galaysa Kuwait "Sawirro"